Ny prefix (meso) dia avy amin'ny teny grika na midika. (Meso-) dia midika hoe eo anelanelany, eo anelanelany, na eo anelanelany, na eo anelanelany. Amin'ny biôlôjika, dia matetika izy io no manondro ny sehatra na ny vatana.
Teny niorina tamin'ny: (meso-)
Mesoblast ( mesoblast ): Ny mesoblast dia ny afangarangan'ny germinal ny embryon aloha. Ahitana sela izay hivoatra ao amin'ny mesoderm.
Mesocardium (meso-cardium): Ity fonon -tebiteby roa ity dia manohana ny fo feno embryonic.
Ny Mesocardium dia rafitra tsy maharitra, izay mametraka ny fo amin'ny rindrin'ny vatana ary manjono.
Mesocarp (meso-carp): Ny rindrin'ny voam- bolo dia fantatra amin'ny hoe pericarp ary misy loko telo. Ny Mesocarp no eo anelanelan'ny rindrin'ny voankazo mamy. Ny Endocarp no sehatra anatiny indrindra ary ny exocarp no faritra faran'izay betsaka.
Mesocephalic (meso-cephalic): Ity fehezanteny ity dia midika hoe manana loha loha amin'ny ampahany matevina. Ny organisms amin'ny lanjan'ny mesocephalic dia midina eo anelanelan'ny 75 sy 80 eo amin'ny endriky ny cephalika.
Mesocolon (meso-colon): Ny mesocolon dia ampahany amin'ny membrane antsoina hoe tsiranoka na tsiranoka midadasika, izay mampifandray ilay tsipìka mankany amin'ny rindrina ao ambany.
Mesoderm ( mesomera ): Mesoderm no mason'ireo mikraoba eo anelanelan'ny fivelaran'ny embryon izay mampisy fehy mifandraika, toy ny hozatra sy taolana ary rà . Izy io koa dia miorina amin'ny taova sy ny taovam-pananahana, anisan'izany ny voa sy ny gonads .
Mesofauna (meso-fauna): Ny tsy fahampian-tsakafo Mesofauna izay mikraoba mikraoba.
Anisan'izany ny mitefy, ny nematodes, ary ny dian-tongotra manomboka amin'ny 0,1 mm ka hatramin'ny 2 mm.
Mesogastrium (meso-gastrium): Ny faritra afovoany ao amin'ny kibo dia antsoina hoe mesogastrium. Io teny io koa dia manondro ny membrane izay manohana ny vavonin'ny embryon.
Mesoglea (meso-glea): Mesogela dia lafin-javatra vita amin'ny gelatinous misy eo anelanelan'ny sela ivelany sy anatiny ao amin'ny biby tsy misy aina, anisan'izany ny valala, hydra, ary sponges .
Ity sary ity dia antsoina koa hoe mesohyl.
Mesohyloma (meso-hyl-oma): Fantatra amin'ny hoe mesothelioma, mesohyloma dia karazana karazana kansera avy amin'ny epithelium azo avy amin'ny mesoderm. Ity karazana homamiadana ity dia miteraka matetika amin'ny fanesorana ny havokavoka ary mifandray amin'ny asbestos.
Mesolithic (meso-lithic): Io fehezan-teny io dia manondro ny vanim-potoana efa antitra teo anelanelan'ny vanim-potoana Paleolithika sy Neolithic. Ny fampiasana fitaovana vato antsoina hoe microliths dia nanjary nanjaka teo amin'ny kolontsaina tranainy tamin'ny taona Mesolithic.
Mesomere (meso-mere): Ny mesomere dia blastomere (sela vokatry ny fizarazaran'ny sela na fikolokoloana mitroka manaraka ny fampiroboroboana).
Mesomorph (meso-morph): Ity fehezanteny ity dia mamaritra ny olona iray manana vatan'ny muscular izay matevina avy amin'ny tazo azo avy amin'ny mesoderm. Ireo olona ireo dia mahazo tombony avy amin'ny fihenanam-bolo vetivety ary manana vatana kely.
Mesonephros (meso-nephros): Ny mesonephros dia ampahany ambaratonga ao amin'ny reniranon'ny embryoinc ao amin'ny vertebrates. Mivelatra amin'ny voa izy amin'ny trondro sy ny amphibiens, saingy miova ho rafitra fananganana fantsom-pamokarana ambony.
Mesophyll (meso-phyll): Mesophyll dia ny fototarazon'ny photosynthetique amin'ny ravina iray, eo anelanelan'ny epidermis sy ny ambany.
Ny chloroplasts dia hita ao amin'ny planeta metospyll.
Mesophyte (Meso-phyte): Mesophytes dia zavamaniry miaina any amin'ny toeram-ponenana izay manome rano mahamay. Izy ireo dia hita eny amin'ny saha malalaka, tanimboly, ary faritra tsy dia matevina loatra na tsy dia maina loatra.
Mesopic (mes-opic): Ity fehezanteny ity dia manondro ny fananana fahitana amin'ny hazavana maivana. Ny tehina sy ny kôsily dia mavitrika amin'ny sehatra iraisana.
Mesorrhine (meso-rrhine): Ny orona izay manana haavo matevina dia heverina ho môsoro.
Mesosome (meso-sasany): Ny ampiteraina matevina amin'ny arachnids, eo anelanelan'ny cephalothorax sy ny kibon'ny ambany, dia antsoina hoe mesosome.
Mesosphere (meso-sphere): Ny tontolon'ny mesosphere dia ny tontolon'ny atmosfera eo anelanelan'ny tontolon'ny tontolon'ny etona sy ny tontolom-bary.
Mesosternum (meso-sternum): Ny faritra afovoany ao amin'ny boribory, na ny nono dia antsoina hoe mesosternum.
Ny boribory dia mampifandray ny taolam-borona miforona ny tranom-boribory, izay miaro ny taova ao amin'ny tratra.
Mesothelium (meso-thelium): Mesothelium dia epithelium (hoditra) avy amin'ny layer embryonic mesoderm. Manana epithelium tsotra izy io.
Mesothorax (meso-thorax): Ny segondra eo amin'ny bibikely iray eo anelanelan'ny prothorax sy metathorax dia ny mesothorax.
Mesotrophic (meso-trophic): Ity teny ity dia manondro matetika amin'ny vatan'ny rano miaraka amin'ny habetsaky ny sakafo sy ny zavamaniry. Ity sehatra midadasika ity dia eo anelanelan'ny dingana oligotrophic sy eutrophic.
Mesozoa (meso-zoa): Ireo parasita maimaim-poana, izay toy ny kankana, dia monina ao amin'ny tsy fahampian-tsakafo, toy ny papango, trondro, ary trondro kintana. Ny anarana mesozoa dia midika hoe biby (mezon) an'ny biby (zoon), satria heverina ho toy ny fiaraha- miombon'antoka eo amin'ireo biby sy biby.
Ny fomba fitenenana raha toa ianao manana Phobia Weather
Ny sanda eo amin'ny biôlôjika sy ny sufixe: phago- na phag-
Torolalana ho an'ny mineraly hafanana mangatsiatsiaka
Ahoana no ataon'i Magnets?
Understanding Solstices and Equinoxes
Fananana fiasa ara-pototra
Ahoana no Ataon'ny Pop Rock Candy?
Fototry ny Photosynthese - Guide Study
Famaritana ny endriky ny endriky, ny karazana ary ny fampiasana
Biography ary Profil de Tito Ortiz
Fanavotana Slots Vouchers
Fahatakarana ny fitsipiky ny tsy fahazoana antoka Heisenberg
Understanding Quiles: Famaritana sy fampiasana
Li Po: iray amin'ireo poeta malaza indrindra ao Shina
Ny Wildlife of Zion National Park
Inona no atao hoe fitiavan'i Agape ao amin'ny Baiboly?
Mahatsiaro an'i Klaodio Ptolémée: Rain'ny Astronomia sy Jeografia
Mpandika teny matihanina amin'ny teny Anglisy
Inona no tanjon'ny mpanoratra?
SAT 101 nohavaozina
Argumentum ad Populum (antso an-telefaonina)
Afaka Aterineto ve ny finday any am-pianarana?
Ny fomba hitondrana ny andro voalohany amin'ny sekoly
Goldilocks sy ny Trondro Three - Funny Fractured Fairytales
Famaritana momba ny vatana
Inona avy ireo mpanampy?
Raha misy heloka bevava ny fanagadrana an'i Flag, inona no voarara?
Frigate USS Etazonia
The Bowen's Reaction Series
Nahoana ny tanora no tsy mamaky ny vaovao?
Ballet Step Grand Plié - Base Barre
Ny dikany sy ny famaritan'i Adagio
Ny niavian'ny Bodavista Theravada